Dhadhaab: hoggaamiyeyaashu waa in aaney guul-darro u keenin xerada qaxootiga ee dunida ugu weyn. - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Médecins Sans Frontières ayaa ku baaqdey in tallaabo degdeg ah la qaado
MSF waxaa ay hawshiisa waddaa cusbitaal 200 sariirood qaada oo ku yaalla Dhagaxley, oo ka mid ah shanta xero ee qaxootiga ee Dhadhaab la isku yiraahdo. Shaqaalaha MSF waxaa ay sameeyaan celcelis ahaan 14,000 la-talin caafimaad ah bil kasta waxaana ay seexiyaan 1,000 bukaan oo ka kala tirsan qaxootiga iyo bulshooyinka degaanka martigeliyey. Cusbitaalku waxaa uu bixiyaa daryeelka dadka waaweyn iyo carruurta, daryeelka umuliha, qalliin iyo daaweynta HIV/AIDS-ka iyo qaaxada. MSF waxaa ay sidoo kale hawshooda waddaa afar rugo caafimaad oo ku yaalla Dhagaxley, kuwaas oo bixiya daryeel caafimaad oo ay ka mid yihiin daryeelka ka horreeya dhalidda, tallaalada iyo daryeelka caafimaadka dhimmirka.
Hal sano ka hor, bishii Oktoobar 2011, laba shaqaalaha MSF ka mid ah, Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut, ayaa laga af-duubey xerada qaxootiga Dhadhaab iyaga oo gargaar caafimaad oo degdeg ah siinaya dadka Soomaaliyeed. Ilaa hadda waa la haystaa, waxaana MSF, in kasta oo ay sii waddo wax ka qabashada dhibaatooyinka ba’an, ay joojisey in ay mashaariic aan degdeg ahayn ka furto Soomaaliya gudaheeda ilaa laga sii daayo.
Tags: dadaab, MSF, refugee camp, Somali refugees, Somalia